माधव नेपाल र सभामुखलाई सदनमै नांगेझार पारिन कोमल वलीलेNepalpana - Nepal's Digital Online
माधव नेपाल र सभामुखलाई सदनमै नांगेझार पारिन कोमल वलीले
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वलीले एमाले फुटाउने माधवकुमार नेपाल र अग्निप्रसाद सापकोटालाई नांगेझार पारेकी छन् ।
राष्ट्रियसभा बैठकमा एमालेका तर्फबाट बोल्दै वलीले परमादेशबाट सरकार र अध्यादेशबाट पार्टी लोकतन्त्रको उपहास भएको उल्लेख गरिन् । 'परमादेशबाट सरकार, अध्यादेशबाट पार्टी लोकतन्त्रको उपहास हो । यी दुबैले सुरु गरेको विकृति विसंगतिबाट लोकतन्त्र संकटमा पर्छ,' उनले भनिन्, 'यो कसका विरूद्ध गरिएको छ भन्दा नेकपा एमालेलाई सामाना गर्न नसक्ने हुतिहाराको प्रयास हो ।'
वलीले संसदीय व्यवस्थालाई आफ्नो लक्ष्य ठान्ने नेपाली कांग्रेसले नै दल विभाजन अध्यादेश ल्याएर संसदीय व्यवस्था कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाइन् ।
'संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन स्थायित्वका लागि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, पार्टीहरुलाई सजिलै विभाजन हुन नदिने ४० प्रतिशतको प्रावधान हुँदाहुँदै अर्को पार्टी फुटाउन त्यो पनि संसदीय व्यवस्थालाई आफ्नो लक्ष्य ठान्ने कांग्रेसले यस्तो गलत अध्यादेश ल्याउन हुन्छ? मिल्छ ?' उनले प्रश्न गरिन्, 'आफ्नो पहिचान, इतिहास भुल्नेबाट नेपाली संसदीय व्यवस्थाको रक्षा कसरी हुन्छ ?'
एमालेको अवरोधले विधायन समितिको प्रतिवेदन पेश गरेर पहिलो बैठक १५ मिनेट स्थगित भइ बसेको दोस्रो बैठकमा अवरोधका क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य वली पार्टीका तर्फबाट बोलेकी थिइन् ।
दुईजिब्रे अग्नि सापकोटालाई सभामुख पदमा बस्ने अधिकार छैन
नेकपा वलीले प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटालाई पदमा बस्ने अधिकार नभएको पनि बताइन् । कसैलेको स्वार्थका लागि आफ्नै कुर्सीलाई अपमान गर्ने व्यक्ति पदमा बस्न लायक नभएको उनको भनाइ छ ।
'हिजो रामबहादुर बादल लेखराज भट्ट टोपबहादुर रायमाझी प्रभु साहहको एमालेमा आउँदा पद जाने, माधव नेपालजीहरु जसले पार्टीको ह्विप मानेन, उहाँहरुले पार्टीलाई विखण्ड गर्दाखेरी उहाँहरुको पद रहिरहन मिल्छ ?' उनले प्रश्न गरिन्, 'एउटै दिमागभित्र दुइवटा चिन्तन ? एउटै जिब्रोभित्र दुइटा बोली ? यो प्रवृत्तिले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ ? यस्ता व्यक्तिलाई संसदीय व्यवस्थामा कुनै जिम्मेवारी दिनुहुँदैन ।'
सभामुख पदलाई आँच पुर्या्एकाले सापकोटा सभामुख भएर बस्ने अधिकार नभएको उनको भनाइ थियो । 'न्याय भनेको कसैलाई लागु हुने कसैलाई नहुने हुनसक्छ र ? यसले ल्याउने विकृतिलाई सभामुखले जिम्मा लिन सक्नु हुन्छ ? खुट्टी हेरेरै पत्याइयो । व्यवहारले नै पत्याइयो । मानव जीवनमा प्राप्त गरेको अमूल्य समयको दुरुपयोग सभामुखले गर्नुभएको छ नेपालको संसदीय इतिहासमा कलंकित बन्नेछ,' उनले भनिन् ।
‘कोमल वलीले सारी सरक्क माथि सर्काएर पिडुँला देखाएको’ भन्ने रघुजी पन्त अफ्ठ्यारोमा, जेल जानसक्ने
भाद्र २८, २०७८ सोमवार १५:३६:३८ बजे : प्रकाशित